လာဟိုးမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘတ်ဒ်ရှာဟီ ဗလီ၊ ဝါဇာခန် ဗလီ၊ နော်လာခါ အဆောက်အဦး၊ လာဟိုးပြတိုက်၊ ရှာလမာဥယျာဉ်၊ မီနာ-အီး-ပါကစ္စတန်၊ လာဟိုး ခံတပ်
နာမည်ပြောင်(များ): The Heart of Pakistan, Paris of the East, City of Gardens, City of Hazrat Ali Hujwiri
ကိုဩဒိနိတ်: 31°32′59″N 74°20′37″E﻿ / ﻿31.54972°N 74.34361°E﻿ / 31.54972; 74.34361ကိုဩဒိနိတ်: 31°32′59″N 74°20′37″E﻿ / ﻿31.54972°N 74.34361°E﻿ / 31.54972; 74.34361
၁,၇၇၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၈၄ စတုရန်းမိုင်)
၂၁၇ မီတာ (၇၁၂ ပေ)
၆၃၀၀/km၂ (၁၆၀၀၀/sq mi)
$65.14 billion (2017)
လာဟိုးမြို့ သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ကရာချိမြို့ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးမြို့ ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လည်း လူဦးရေအများဆုံး မြို့ပြနေရာတွင် အဆင့် ၁၈ ရှိသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ တွင် ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွားခြားမှုနှုန်းကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသည် ဂျီဒီပီမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅.၁၄ ဘီလီယံမျှ တန်ဖိုး ရှိသည်။ လာဟိုးသည် ပန်ဂျပ်ဒေသ တစ်ခုလုံးတွင် အကြီးဆုံးနှင့် သမိုင်းယဉ်ကျေးမှု အချက်အချာ ဌာနတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လူမှုရေးအရ အပွင့်လင်းဆုံး၊ ရှေ့အရောက်ဆုံး နှင့် အဆင့်အတန်း မခွဲခြားဆုံး မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။
လာဟိုးမြို့၏ မူလအစသည် ရှေးပဝေသဏီကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် မင်းဆက်များစွာက အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီး အလယ်ခေတ်ကာလက ဟိန္ဒူရှာဟီမင်းဆက်၊ ဂတ်ဇ်နဗစ်မင်းဆက်၊ ဂူရစ်မင်းဆက် နှင့် ဒေလီစူလတန် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ လာဟိုးသည် ၁၆ ရာစု နှောင်းပိုင်း မှ ၁၈ ရာစု အစောပိုင်း ကြား မဂိုမင်းဆက် အုပ်ချုပ်စဉ် အချိန်တွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြို့တော်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိခဲ့သည်။ ၁၇၃၉ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်အား အက်ဖ်ရှရစ်မင်းဆက်၏ ဘုရင် နဒါရှား၏ တပ်များမှ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး အာဖဂန် နှင့် ဆစ်ခ်တို့အားပြိုင်မှုကြားတွင် ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ဆစ်ခ်တိုင်းပြည်၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခင်က ပျောက်ကွယ်ခဲ့သော ကြီးမြတ်မှုများ ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် လာဟိုးအား ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာ အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ ပန်ဂျပ်၏ မြို့တော် အဖြစ် ထားရှိခဲ့သည်။  လာဟိုးသည် အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်တို့၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအတွက် ဗဟိုချက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာရာမြို့ နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ထူထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာရာမြို့လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန် လွတ်လပ်ရေး မရရှိမီ အိန္ဒိယမှ ခွဲထွက်စဉ်၌ လာဟိုးတွင် အဆိုးရွားဆုံး အကြမ်းဖက်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပါကစ္စတန် လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ပြီး ၁၉၄၇ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်တွင် လာဟိုးအား ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။
လာဟိုးသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပေါ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးခြင်း အများအပြား ရှိသည်။ လာဟိုးသည် ပါကစ္စတန် ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိက ဌာန ဖြစ်ပြီး ပါကစ္စတန် စာပေအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရှေ့ဆောင်နေရာ အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးအတွက် အဓိက ဌာနလည်း ဖြစ်ပြီး  ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ဦးဆောင် တက္ကသိုလ် အချို့သည် လာဟိုးတွင် ရှိသည်။  လာဟိုးသည် ပါကစ္စတန် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဖြစ်သော "လောလီးဝုတ်" ၏ အခြေစိုက်ရာ နေရာလည်း ဖြစ်ပြီး ကောဝါလီ ဂီတ ၏ အဓိက နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အဓိက နေရာလည်း ဖြစ်ပြီး  အဓိက လာရောက်လည်ပတ်ရာ နေရာများဖြစ်သော တံတိုင်းမြို့တော်၊ ကျော်ကြားသော ဘတ်ဒ်ရှာဟီ နှင့် ဝါဇီခန် ဗလီများ၊ ဆစ်ခ်ဘုရားကျောင်းများ ရှိသည်။ ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် နေရာစာရင်းဝင်သော လာဟိုး ခံတပ် နှင့် ရှာလမာဥယျာဉ်တို့ တည်ရှိရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။
↑ Punjab Portal။ Government of Punjab။ 25 June 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population of Major Cities Census – 2017 [pdf]။ Pakistan Bureau of Statistics။ 29 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Dialing Codes။ Pakistan Telecommunication Company Limited။3September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Lahore’s economy: Rs1 trillion and growing Dr Nadia Tahir - Newspaper - DAWN.COM
↑ Pakistan: Provinces and Major Cities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information။
↑ Internet Archive Wayback Machine။ Web.archive.org (22 April 2008)။ 29 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shelley၊ Fred (16 December 2014)။ The World's Population: An Encyclopedia of Critical Issues, Crises, and Ever-Growing Countries။ ABC-CLIO။ p. 356။ ISBN 978-1-61069-506-0။ Lahore is the historic center of the Punjab region of the northwestern portion of the Indian subcontinent
↑ Usha Masson Luther (1990)။ Historical Routes of North West Indian Subcontinent, Lahore to Delhi, 1550s–1850s A.D.: Network Analysis Through DCNC-micro Methodology။ Sagar Publications။
↑ Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific: Why Some Subside and Others Don't။ Routledge။ 2013။ ISBN 978-0-415-67031-9။ 8 April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Lahore, perhaps Pakistan's most liberal city...
↑ Craig၊ Tim။ "The Taliban once ruled Pakistan's Swat Valley. Now peace has returned."၊ Washington Post၊9May 2015။ ""We now want to dress like the people of Punjab," said Abid Ibrahim, 19, referring to the eastern province that includes Lahore, often referred to as Pakistan's most progressive city."
↑ "Lahore attack: Pakistan PM Sharif demands swift action on terror"၊ BBC၊ 28 March 2016။ 19 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Lahore is one of Pakistan's most liberal and wealthy cities. It is Mr Sharif's political powerbase and has seen relatively few terror attacks in recent years."
↑ Rising Lahore and reviving Pakistan – The Express Tribune (21 July 2013)။
↑ Leading News Resource of Pakistan။ Daily Times (4 March 2005)။ 12 February 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zaidi၊ S. Akbar (15 October 2012)။ Lahore's domination။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ Windsor၊ Antonia။ "Out of the rubble"၊ The Guardian၊ 22 November 2006။ 27 March 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ Planet၊ Lonely။ Lahore, Pakistan – Lonely Planet။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လာဟိုးမြို့&oldid=727456" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။